Haleellaa Iiraan keessatti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 25 ajjeefaman - NuuralHudaa
Haleellaa Iiraan keessatti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 25 ajjeefaman
On Sep 22, 2018 16
Agarsiisa Raayyaa ittisa Iiraan magaalaa Ahvaazit jedhamtu keessatti geggeefamaa ture irratti haleellaa raawwatameen, yoo xiqqaate loltoota dabalatee namoonni 25 akka ajjeefamanii fi 54 ammoo kan madaayan tahuu ejensiin Odeeyfannoo biyyattii gabaase. Halellaan kun yemmuu raawwatamu, Raayyaan ittisa biyyattii yaadannoo lola Iiraan fi Iraaq jiddutti bara 1980 hanga 1988 geggeefame ilaalchisee agarsiisa irra ture. Namoota ajjeefamanii fi madaayan jidduu haawwanii fi daa’imman agarsiisa kana daaw’ataa turan keessatti argamu.
Haleellaa kana qabatamaan eennu akka raawwate hanga ammaattii wanti ibsame hin jiru. Haa ta’u malee Ministeerri haajaa alaa Iiran Javaad Zariif gama Tiwitterii isaatiin “shororkeessitoonni biyyoota alaatiin qaxaramanii, leenjifamanii hidhachiifaman Avaazitti haleellaa raawwatanii jiru. Ameerikaa fi ergamtoonni isii naannichatti shororkeessummaa raawwattan itti gaafatamummaa fudhachuu qabu” jedhe. Magaalaan Ahvaaz kibba lixa Iiraanitti kan argamtu yoo taatu, kanaan dura ummanni magaalattii yeroo heddu mootummaa irratti mormii kaasaa ture.
May 22, 2022 sa;aa 2:31 pm Update tahe